Samsung waxay soo saari doontaa nooca Lite ee Galaxy Tab S7 | Androidsis
Kuwo badan ayaa ah kuwa adeegsada ee baahidoodu u maraynin adeegsiga teknolojiyadda ugu horumarsan ee processor-rada laga heli karo waqtigaas suuqa kuna qanacsan moodel leh waxqabad aad u macquul ah iyada oo aan loo tudhin horumarka tiknoolajiyada, noocyada Lite-ku waa ikhtiyaar aad u fiican.
Maanta, kiniiniyada ugu horumarsan ee Samsung ay na siiso ayaa ah Galaxy Tab S7 iyo S7 +, kiniiniyada qaar in waxay ka baxaan miisaaniyadda isticmaaleyaal badan. Xalku waa Galaxy Tab S7 Lite (ku xigga kan Galaxy Tab S6 Lite), oo ah kiniin sida ilo kala duwan ka soo baxa suuqa soo galaya xagaagan.
Qofka adeegsada Twitter-ka ee Walking Cat ayaa la wadaagay dhowr sawir oo Samsung ay qarka u saaran tahay inay ku dhufato suuqa kiniinka. Dhinaca kale, waxaan ka helnaa Galaxy Tab S7 Lite, oo ah kiniin leh 12,4 inches (2 inji ka weyn kii ka horeeyay ee Galaxy S6 Lite) oo u dhigma cabirka shaashadda Galaxy S7 +.
Moodelkan ayaa sidoo kale laga heli doonaa gudaha 5G nooca waana la jaan qaadi doontaa Samsung Sii wadida markaa waad ka jawaabi kartaa oo ka soo wici kartaa taleefan Samsung ah oo la jaan qaada.
Noocyada ugu raqiisan Samsung ee kiniiniyada, Galaxy Tab A, ayaa heli doona Galaxy Tab A7 Lite, oo ah nooc leh a 8,7 inch screen (Galaxy Tab A7 wuxuu leeyahay 10.4 inji) oo loogu talagalay in lagu cuno waxyaabaha ku jira qulqulka, shabakadaha bulshada ...
Qalabkani wuxuu yeelan lahaa qaab bir ah inkasta oo lama oga inuu ku darayo 4-ta ku hadla in aan ka heli karno nooca Tab A7.
Daahfurka labada nooc ayaa loo qorsheeyay dhowr bilood, malaha june. Haddii aad ka fekereyso inaad cusboonaysiiso kaniinigaaga oo aad doorbideyso Samsung, waxaan kugula talinayaa inaad dhowr bilood sugto si aad u tixgeliso haddii mid ka mid ah moodooyinkaasi ay ku habboon yihiin baahiyahaaga iyo miisaaniyaddaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung ayaa bilaabi doonta nooca Lite ee Galaxy Tab S7
3 sheeko oo cusub oo ah Android 12 oo ah maalmihii ugu dambeeyay oo aadan tabi karin